अनुहारको चमक बढाउने यी हुन् उपाय – rastriyakhabar.com
अनुहारको चमक बढाउने यी हुन् उपाय
अनुहारलाई कसरी आकर्षक बनाउने ? अनुहारमा कसरी चमक ल्याउने ? कसरी नरम बनाउने ? अक्सर धेरैको मनमा उब्जने प्रश्न हो यो ।
हुन पनि झट्ट हेर्दा देखिने भाग हो, अनुहार । अनुहारको सौन्दर्य नै फिका छ भने त्यसले समग्र व्यक्तित्व ओझेल बनाइदिन्छ । अहिलेको जमानामा व्यक्तित्वको पनि उत्तिकै महत्व छ । व्यक्तित्वले नै दोस्रो व्यक्तिलाई प्रभाव पार्न सकिन्छ ।
अब लागौं, सौन्दर्य बढाउने काइदातर्फ ।
अनुहारको सौन्दर्य कसरी बढाउने त ? यसका लागि कसैले कस्टेटिक्स प्रयोग गरिरहेका होलान् । कसैले सरसफाईमा ध्यान दिइरहेका होलान् । कतिले सर्जरीको साहारा पनि लिएका होलान् । कतिले स्वस्थ्य खानपान र जीवनशैली अपनाइरहेका होलान् ।
वास्तवमा अनुहारमा निखार ल्याउनका लागि खानपानदेखि उचित हेरचाहसम्म आवश्यक हुन्छ । स्वस्थ्य खानपान, अनुशासित दिनचर्या, सरसफाईले अनुहारमा चमक ल्याउन सकिन्छ । त्यतीमात्र होइन, मानसिक स्वास्थ्य पनि ठिक हुनुपर्छ । मनमा पिडा, कुष्ठा, घृणा जस्ता विकार छ भने, अनुहारको चमक फिका देखिन्छ । त्यसैले स्वस्थ्य जीवनशैलीसँगै मानसिक सुखले पनि सौन्दर्यमा अहंम भूमिका खेल्छ ।
अब सामान्य काइदातर्फ लागौं । अनुहारमा चमक ल्याउन स्वस्थ्य जीवनशैली अपरिहार्य हुन्छ । यसमा खानपानको पनि उत्तिकै भूमिका हुन्छ । कतिपय यस्ता खानेकुरा हुन्छ, जो सौन्दर्यका लागि हितकर मानिन्छ ।
अनुहारमा चमक ल्याउन स्वस्थ राख्न खानपानमा ध्यान पुर्‍याउनु पर्छ । व्यक्तिको खानपानले उसको अनुहारमात्र हैन, उसको सम्पूर्ण स्वास्थ्यलाई नै स्वस्थ राख्छ । यसको लागि एन्टीअक्सिडेन्ट, विटामिनयुक्त आहार प्रोटिन लगायतका अन्य पोषणतत्वको सेवन गर्न पनि निकै जरुरी छ । जुन यस प्रकार छः
डार्क चमलेट छालाको लागि राम्रो मानिन्छ । डार्क चकलेटमा पाइने एन्टीअक्सिडेन्ट तत्वले छाला सुख्खा हुन पाउदैन । साथै सुर्यको विकिरणबाट समेत छालालाई जोगाउँछ ।
गाजरमा भरपूर मात्रामा भिटामिन ‘ए’ पाइन्छ । यसको सेवनले अनुहारको चमक बढाउँछ र अनुहार आर्कषक देखाउँछ । यसलेे छालामा बाहिरी पत्रमा रहेको कोषिकालाई पोषणतत्व प्रदान गर्दछ ।
बदाममा भिटामिन ‘ई’ भरपूर मात्रामा पाइन्छ, जसले एन्टीअक्सिडेन्ट तत्व सरह नै काम गर्छ । यसे छालालाई सुर्यको विकिरणकोबाट बचाएर छालालाई स्वस्थ राख्न मद्दत गर्छ ।
गि्रन टीको अनेकौ फाइदाहरु छन् । त्यसमध्यको प्रमुख भनेको ग्रीन टीले छालामा क्यान्सर हुनबाट जोगाउँछ । ग्रीन टीमा प्रशस्त मात्रामा एन्टीअक्सिडेन्ट रहेको हुन्छ । जसले छालालाई आर्कषक देखाउन तथा अनुहारमा चमक ल्याउन मद्दत गर्छ । यसको प्रयोग फेशियल, स्क्रबिङ्ग, स्टीमद्धारा पनि गर्न सकिन्छ ।
प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने । धुमपान तथा मदिरापानबाट टाढै बस्ने । हरेक दिन विहान प्राणायाम गर्ने । स्वस्थ्यकर तथा पौष्टिक तत्वयुक्त खानेकुराको सेवन गर्ने । अनुहारलाई मोइस्चराईज गर्ने । प्रत्येक पल्ट घरबाट निस्कनु पूर्व अनुहारलाई राम्ररी ढाक्ने। सन्सकि्रम तथा सनग्लासको प्रयोग गर्ने ।
यी हुन धेरै तनावमा रहने मानिसलाई लाग्न सक्ने ९ रोगहरु
ओलीलाई अब ६ महिना कसैले चलाउन नसक्ने
संसद सचिवालयद्वारा संसद अधिवेशन अन्त्यको सूचना जारी